Vaovao - Nanangana fonosana vaovao i Meeden
Ho valin'ny filan'ny mpanjifa, ny meeden orinasa, raha mahafeno ny filan'ny mpanjifa isan-karazany, dia manaraka ny fiheverana ny fiarovana ny tontolo iainana, ary nandefa fonosana isan-karazany misy kalitao avo sy vidiny ambany.
Famolavolana mora nefa tsy ambany
Boaty hazo azo alain-tanana, vita tanana sy voalamina miaraka amin'ny beech avo lenta, miaraka amina vatasarihana sy fitehirizana, dia afaka mitahiry tsara zavakanto ary mamorona kanto na aiza na aiza.
Andiana kanto maro fampiasa
Ahitana pensilihazo miloko, crayons, penina miloko solitany, penina avo roa heny, penina fotsy, famafana, pensilihazo avana, rakitsary misy sary, ary kojakoja kanto isan-karazany hihaonana amin'ny zavakanto noforoninao.
Fiarovana, tsy misy poizina, fiarovana maitso ary tontolo iainana
Ny fitaovana sy ny sary hosodoko rehetra dia nandalo ny fanaraha-maso sy ny fanamarinana, tsy misy poizina, tsy misy tsirony, azo antoka, tsy misy fofona, tsy manisy ratsy ny ankizy, ary azo ampiasaina mora foana.
Fanomezana ho an'ny ankizy lavorary
Ny fonosana tsirairay dia misy fonosana lohahevitra samy hafa, ao anatin'izany ny loko sy haino aman-jery isan-karazany. Fanomezana mamorona tokoa ity. Ny fisafidianana ity fitaovana fandokoana ity ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny ankizy sy ny Noely dia hitondra fahafinaretana sy dikany bebe kokoa amin'ny fiainany
MEEDEN Mirehareha amin'ny fanomezana mpanjifa amina vokatra avo lenta kanto. Raha tsy misy antony tsy mahafa-po anao amin'ireto sary hosodoko ireto, mifandraisa mivantana amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa MEEDEN, hamaha ny olana amin'ny fotoana izy ireo ary hiantoka ny famerenam-bola 100%. azo antoka fa hividy.